မြားများ: အမည် ပေးမထား(Untitle)
ရေးမယ်ဆိုတော့ကာ ဘယ်က စရမည်လဲ.။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တခုခုတော့ ရေးချင်နေမိသည်။ ဒီရက်ပိုင်း မြင်ရ ကြားရ တွေ့ရသည်မှာ အမျိုးစုံဖြစ်သည်။သို့သော် အကြောင်းတခုခုကို ရေးဖို့ စဉ်းစားလိုက်တိုင်း အစ ရှာမရတတ်။ ခက်တော့ အခက်သားကလား။သို့အတွက် ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ အပြစ်တင်မိသည်။ ဘာမှ လည်း ရေရေရာရာ မသိ၊ မတတ်။ ဒီတော့ ကျောင်းတုန်းက စာမေးပွဲမှာ စာစီစာကုံး ရေးသလို ခေါင်းစဉ်ရှာပြီး အဲဒီ ခေါင်းစဉ်အောက်က အကြောင်းအရာတွေကိုပဲ စီချရေးရရင် ကောင်းမလားပေါ့။ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တို့၊ ကျွန်တော် အသွားချင်ဆုံးနေရာတို့ ၊ အစရှိသဖြင့်..။ အဲတော့ စဉ်းစားလိုက်တယ် ခေါင်းစဉ်ကို ။ ဒါပေမယ့်ထွက်မလာ။ တလောက မောင်တေဇာက တော်ရိလျော်ရိ ဖတ်စာဆိုပြီး ရေးချသွားတာ အမိုက်စားဗျ။ သူ့ခမျာလည်း အခက်အခဲတွေ ကြားထဲက အဲဒီခေါင်းစဉ်ကို တော်တော်လေး ရှာပြီး မွေးစားလိုက်ရတာ။ ကိုတာတို့ မြင့်သန်းတို့ မောင်ဝဏ္ဏတို့က ဘာသာ စကား တော်တော် များများကို မောင်ပိုင်စီးထားကြပြီး ဆိုတော့ သူ့မှာလည်း သူများ အလုံးကို ယူသုံးမိမှာ စိုးထင်ပါ့။ ဒီတော့ ကျွန်တော်လည်း တခုခုတော့ ရှာလေ။ ရှာရုံပေါ့.။ သူများ အလုံး၊ သူများ သုံးပြီးသား အလုံး မဟုတ်တဲ့ ဟာ…။
ဟိုးအရင် ခုထက်ပိုပြီး ယောင်ချာချာ လုပ်နေတုန်းက စာလေး ကဗျာလေး မတောက်တခေါက်ဖတ်ပြီး ကဗျာ ရွတ်ပွဲဆို ရှေ့ဆုံးက ..၊ စာပေ ဟောပြောပွဲဆိုေ၇ှ့ဆုံးက ၊ ပန်းချီပြပွဲ ဆိုလည်း ရှေ့ဆုံးက မြောက်ကြွမြောက်ကြွ ဖြစ်နေတုန်းက ပန်းချီပြပွဲတွေကို သွားတိုင်း ပန်းချီကားတွေရဲ့ ခေါင်းစဉ်တော်တော်များများ တွေ့ဖူးတယ်..။ ဘာတဲ့…အမည်ပေးမထားတဲ့။ untitle ပေါ့ဗျာ။ ကောင်း၏။ မိမိ၏ အနုပညာ ပြချက်ကို ခေါင်းစဉ်မတပ်ကြဘူး.။ကြည့်ရှု ခံစားသူရဲ့ အသိပညာ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း တဆုံး ကြိုက်သလို ခံစား.။ကြိုက်သလောက် ခံစား။ အမည်ပေးမထားဘူး.။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် စိတ်ကူးရွက်လွှင့်လို့ ရသလောက် ခံစားပစ်လိုက်။ သူ့အနုပညာကို ခေါင်းစဉ် တခုတည်းအောက်မှာ ပိတ်မနေစေချင်တဲ့ သဘော။ အဲဒီ အန်တိုင်တယ်….၊ အမည်ပေးမထားဆိုတာလေးက ခေါင်းထဲမှာ စွဲနေတယ်..။ အနိပ်ပေါ့။ ခု ဒီစာစုလေးရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ပေးဖြစ်ဖို့ အဲဒီနာမည်လေးက အကြောင်းဖန်လာချေပြီ။ ဟုတ်တယ်..ဝိနည်း လွတ်တယ်လေ။ ခေါင်းစဉ်မှာမှ အမည်ပေးမထားဆိုတော့ ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ တောရောက်တောင်ရောက် အကြောင်းအရာ ပေါင်းစုံ ထည့်ရေးလို့ ၇တာပေါ့။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောလို့ ရတာပေါ့။ ဘယ်လောက်နိပ်လဲ..စာဖတ်သူ..။
ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ ခေါင်းစားခဲ့ရတာတွေ တော်တော်ကြုံဖူးတယ်.။တခါတလေ စိတ်ထဲ ခံစားချက်လေးတွေ ပေါ်လာလို့ ကဗျာအတိုအစလေးတွေ ရေးပြီးတိုင်း ခေါင်းစဉ်ပေးဖို့ စဉ်းစားရတာက တလုပ်။ တော်တော်နဲ့ ခေါင်းစဉ်က ထွက်မလာတတ်.။ခုနောက်ပိုင်း ရေးကြတဲ့ Post Poetry တို့၊ Contempoary Poetry တို့၊ Language Poetry တို့.၊ Slam Poetry တို့ က တချို့ကဗျာတွေလို ကဗျာပါဒ တစ်ခုလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တာ တခုမှ မပါလည်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ် တခုခု ပေးလို့ ၇တယ် ဆိုတာ နို့ သိမှ မသိဘဲကိုး။ ကိုယ်က တော်တော်ကို ခေတ်နောက်ကျ ကျန်ရစ်ခဲ့တာပါ။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော့် ကဗျာတွေလေ…ဘုရားစူးရစေ့ .ဘယ်မဂ္ဂဇင်းမှာမှ ပုံနှိပ်ဖော်ပြခြင်းလည်း မခံရဖူးပါဘူး.။ အရင်ကတော့ ပို့ဖူးပါတယ်. ။ဒါပေမယ့် နေရာ ဒေသ အလှမ်းကွာလွန်းတော့ နောက်ပိုင်း မပို့ဖြစ်တော့ပါဘူး.။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ နှစ်သိမ့်မိပါတယ်.။ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ကိုယ့်ကဗျာအတိုအစလေးတွေ ပါလာမှ ပါဖူးမှ ကဗျာဆရာလို့ အများက သတ်မှတ် ခံရတာထက် (ပုံနှိပ်ဖော်ပြ မခံရတဲ့ အဆုံး) ကိုယ့်ဘာသာ လျှောက်ရေးပြီး…ကိုယ့်ဘာသာ ကဗျာဆရာလို့ ကျေနပ်နေလိုက်ရင်လည်း ဖြစ်တာပါပဲလို့..။ ရောင့်ရဲနိုင်ခြင်းရယ်လို့ တရားရသူလိုလို ကျေနပ်နေလိုက်တာပါပဲ…။ မဟုတ်ဘူးလား..။ ထားတော့ ဒီကိစ္စ။
ကဗျာရေးတယ် ဆိုတာကလည်း ပန်းချီဆရာ ပန်းပုဆရာတွေလို အကုန်အကျ တယ်များလှတာမှ မဟုတ်တာ.။ ဆေးဖို့း စုတ်တံဖိုး ကင်းဗတ်စဖိုး ဘာတစ်ခုမှ ကုန်တာ မဟုတ်ဘူးလေ.။ မသကာ အပေါစား(မှင်ထင်တဲ့) ဘောပင် တချောင်းရယ်၊ စာရွက်အလွတ် တရွက်လောက် ရှိလည်း ဖြစ်နေတာပါပဲ.။ တချို့ကတော့ ဖောင်တိန် နစ်ခ်ကောင်းကောင်းနဲ့ အကောင်းစား စာရွက်တွေနဲ့ တတ်နိုင်တဲ့ သူတွေလည်း ရေးကြပေမပေါ့။ ဒီတော့ကာ ကဗျာဆိုတာ အားလုံးနဲ့ နီးစပ်ပြီးသား။ ဆိုက်ကားဆရာလည်း ကဗျာရေးလို့ ၇တယ်။ မြင်းလှည်းဆရာလည်း ကဗျာရေးလို့ ၇တာပဲ။ သမ္မတလည်း ကဗျာ ရေးလုိ့ရတာပဲ.။ ကဗျာဂုဏ် မြောက် မမြောက်သာ အဓိက ကျတာ.။မိမိ ရေးလိုက်တဲ့ ကဗျာဟာ ကဗျာဖတ်မယ့်သူနဲ့ ကင်းကွာ မနေစေဖို့ပဲ လိုတာ..။ ဟုတ်ဘူးလား.။ ရှေးယခင် ဆရာကြီးများ ဆိုမိန့်ကြတာ ကြားဖူးပါရဲ့.။ ကဗျာရေးသူဟာ စေတနာ အရေးကြီးတယ်လို့..။
သို့ပေမယ့် ဒီဘက်ခေတ် ပြောင်းလဲလာတဲ့ ကဗျာ ပုံသဏ္ဍန်တွေက ကဗျာကို ကန့်သတ်လာကြပါတယ်။ ကဗျာ ဖတ်မယ့်သူကိုလည်း ကန့်သတ်လာကြပါတယ်။ ကဗျာဆိုတာ ကဝိပစ္စည်းဆိုတာ လက်ခံပါတယ်.ခင်ဗျာ.။ ရေးသူသာ ကဝိလား။ ဖတ်သူဟာ ကဝိလားတော့ သေသေချာချာ မပြောနိုင်သေးပါဘူး.။ သို့သော်လည်း ကဗျာသည် ပြည်သူ့အတွက်တို့. ကဗျာသည် အနုပညာ အတွက်တို့၊ ကဗျာသည် ဘာအတွက်မှ မဟုတ်တို့ ဒီဘက် ပိုင်းမှာ တော်တော် ကြားရပါတယ်.။ကျွန်တော် အမြင်တော့ တခုခုအတွက်တော့ ရည်ရွယ်ရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်.။ ဘာအတွက်မှ မဟုတ်ရင် ဘာလို့ များရေးနေဦးမလဲ ခင်ဗျာ.။ ဒီကြားထဲ နားမလည်ရင် မဖတ်နဲ့တွေ ၊ ဖတ်သူရဲ့ အနုပညာ ကိုယ်ခံအားတွေ ပြောလာတော့ ရင်နာရပါတယ်. ခင်ဗျာ.။ ဟုတ်ပါတယ်..။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘယ်လို ကဗျာဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူရေးတဲ့ ကဗျာ ဖြစ်ဖြစ် နားမလည်ရင် မဖတ်ပါဘူး.။ ဒါက ကိုယ့် အခွင့်အရေးကိုး.။ ဘယ်သူကမှလည်း အတင်း ရိုက်နှက်ပြီး ဖတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာလည်း ရှိမှ မရှိဘဲ.။ ကဗျာဖတ်ပြီး တမဂ်တဖိုလ် ဆိုက်သွားတဲ့ သူ မရှိသလို.။ ကဗျာဖတ်ပြီး လူဆိုး သူခိုးဖြစ်သွားတဲ့ လူလည်း မရှိပါဘူး.။ တချို့လည်း ကဗျာ မရေးရရင် မနေနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေ ရှိပါတယ်.။ ရေးပေါ့.။ ရေးကြပေါ့.။ ကောင်းပါတယ်.။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က ကဗျာရေးပြီး ဆိုကတည်းက လူ တဦးတယောက်ကို တော့ ပြချင် ဖတ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒတော့ ရှိမှာပါ.။ မရှိဘူးဆိုရင်လည်း အဲဒီလူ ညာတာပဲ ဖြစ်မှာပါ.။ ကျွန်တော်လည်း ကဗျာရေးပါတယ်.။ အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ်ဖတ်စေချင်တဲ့ သူငယ်ချင်း သုံးလေးယောက်လောက်တော့ နားလည်အောင် ရေးပါတယ်.။ နီးစပ်မှု ရှိအောင် ရေးပါတယ်..။ ခင်ဗျားကတော့ ပြောရင် ပြောမယ်.။ ဒါဆို မင်းက ရိုးသာမှု မရှိဘဲ လုပ်ကြံရေးတဲ့ ကဗျာပဲ လို့ ပြောချင်မှာပါ.။ မတတ်နိုင်ပါဘူး.။ ကျွန်တော်ဟာ စာပေအရာမှာ ပါရမီ မရှိပါဘူး.။မောင်ချောနွယ် တို့လို ကဗျာရေးတဲ့ အချိန်မှာ ဘယ်ကဗျာ နတ်ကမှလည်း ဖမ်းစားခြင်း မခံရပါဘူး.။ ကိုယ့် သိမှု နယ်ပယ် ကျဉ်းကျဉ်းလေး အတွက်ကပဲ ရေးနိုင်ပါတယ်။.။ ဒါပေမယ့် ဥိးတည်ချက် တစုံတရာတော့ ရောက်အောင် ရေးပါတယ်.။ ကျွန်တော် အနေနဲ့ ဘာသာစကားကို တတ်နိုင်သမျှ ဒုက္ခပေး လီဆယ်ပြီး မရေးတတ်ပါဘူး.။ ကိုယ် သိတဲ့ စကားလုံးတွေလောက်နဲ့ပဲ ချရေးလိုက်တာပါ။
ကုန်းဘောင်ခတ်က ဝန်ကြီး ပဒေသ ရာဇာရဲ့ တျာချင်းတွေမှာ လယ်သမားဘဝ၊ ထန်းတက်သမားဘဝတွေ ရေးစပ်ပြသွားတာ ဘယ်လောက် နီးစပ် လှပမှု ရှိပါသလဲ.။ ကျေးလက်အခေါ်အဝေါ်တွေနဲ့ပဲ လှလှပပ ရေးပြသွားတာ.။ ၂၀ ရာစု အကုန်ပိုင်း ဆိုရှယ်လစ် ခေတ်လွန် မှာ ပြောင်းလဲလာတဲ့ လူနေမှု ပုံစံတွေအရ ကဗျာ ပုံစံတွေလည်း ပြောင်းလဲ လာခဲ့တာပါ။ ထားတော့ ။ ကျေးလက် လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ မြို့ပြနေ လူတန်းစားတို့ရဲ့ တွန်းထိုး ရုန်းကန်လာရမှုတွေကနေ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ ခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေဟာ လှပပြီး အများနဲ့လည်း နီးစပ်မှု ရှိပါတယ်.။ ရိုးလည်း ရိုးရှင်းပါတယ်.။ ကျေနပ်စရာလည်း ကောင်းပါတယ်.။ဥပမာ ကျွန်တော် ဖတ်ဖူးသလောက် ပြောရရင် စိုင်းဝင်းမြင့်ရဲ့ အရေးအသားတခုလို ၊ မိသားစု ကဗျာလို.။မိုးဝေးရဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် လို။ နောက်ထပ် ကျွန်တော် မဖတ်ဖူးပြီး ကောင်းတာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်.။ ဒါက လက်လှမ်းမှီရာ အောင်ခင်မြင့်ရဲ့ စာစုထဲက ထုတ်နှုတ် ပြတာပါ.။ ဒါက အားလုံးဟာ ခံစားမှုချင်း ပုံသဏ္ဍန်ချင်း နီးစပ်မှု ရှိတယ် ဆိုတာ ပြောကြည့်တာပါ.။ နာမည်ကြီးတဲ့ သူတွေချည်း ထုတ်နှုတ်ပြတာ မဟုတ်ပါ.။ အားလုံး မဖော်ပြနိုင်တဲ့ အတွက် နားလည် ပေးကြပါကုန်.။
ဟော ..အဲဒီကနေ ထပ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ အနုပညာ ပုံသဏ္ဍန်တွေ၊ ကဗျာ အမျိုးအစားတွေကလည်း စုံမှ စုံပါပဲ ခင်ဗျာ.။ ခေတ်ပြိုင် Globalization လှိုင်းလုံးကြီးနဲ့ အတူ အနုပညာ ပုံသဏ္ဍန်တွေလည်း ပြောင်းလဲ လာခဲ့တော့တာပါပဲ.။ ဒီမှာ ပြောချင်တာက ၁၉၇၀ နောက်ပိုင်း မော်ဒန်ကဗျာ မော်ဒန် ဝတ္ထုတို ခေတ်ကနေ လက်ရှိ တိုးတက်(တိုးတက်လာတာပဲ ဆိုပါတော့) ပြောင်းလဲ လာတဲ့ အချိန်ထိ ပုံသဏ္ဍန်ပေါင်းစုံ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်.။ ဇော်ဇော်အောင်က ပို့စ်မော်ဒန် ဆိုပြီး ဘာမှ မသိရှာသေးတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကို ချပြသဗျ။ မင်းခက်ရဲကလည်း ပို့စ်မော်ဒန် ဆိုတဲ့ ဟာတွေ အဆက်မပြတ် တင်ပြေနေဆဲဗျ.။ မြင့်သန်းကတော့ ပို့စ်မော်ဒန်ဆိုတာ Deconstruction ဖြုိခွဲ ဖျက်ဆီးရေးမှာ အခြေခံတယ်ဆိုလို့ အနိစ္စ အနိစ္စလို့ ရေရွတ်ရင်း ပို့စ်မော်ဒန် နည်းလမ်းတကျ သေကြည့်ရန် စဉ်းစားနေပါသတဲ့ ခင်ဗျာ။ ဇေယျာလင်းက LP ဆိုပြီး တင်ဆက်သဗျ။(သူပြောတာက တင်သွင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သိစေချင်လွန်းလို့ ချပြတာပါ တဲ့)။ ငြိဏ်းဝေက Performance တွေ၊ Installation တွေ.။ Post Poetry တွေကို အရှိန်နဲ့ ချပြသဗျ.။ ကျေးဇူးတင်စရာ ကောင်းလှပါသည်.။ ကျွန်တော့်လို နလပိန်းတုန်းတွေ လက်လှမ်းမမှီနိုင်တဲ့ အနောက်က အနုပညာ ပုံသဏ္ဍန်တွေ တင်ဆက်နေခြင်းပါ. ခင်ဗျာ.။ ကဗျာတွေကို သရုပ်ခွဲခြင်း ပုံစံ၊ ပို့စ်မော်ဒန်အခေါ် ဒီကွန်စထရပ်ရှင်းမှာ ပြင်သစ်က သရုပ်ခွဲပညာရှင် ဖူရီယေးတောင် လိုက်မမှီနိုင်ပါဘူး.။ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ မြန်မာ ဘာသာစကား (အရေး အပြော)ကိုတောင် ဘာသာစကား အကျပ်အတည်း ဘာညာတွေ ပြောသံ အပြစ်တင်သံတွေ ကြားရပါတယ်.။ တချုိ့် မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ ဖော်ပြဖို့ မလုံလောက်လို့ အင်္ဂလိပ်စာတွေ ကြားညှပ်ပြောဆို ရေးသားနေကြတာတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေး ပါပဲ ခင်ဗျာ။ ဒီကြားထဲ သစ္စာနီက စားပွဲနဲ့ ကုလားထိုင်နဲ့ ကဗျာရေးတဲ့ ခေတ်ကုန်ပြီ ဆိုလို့ ကျွန်တော့်မှာ ဒီ စာစုကို အိပ်ယာထဲမှာပဲ ဝမ်းလျားမှောက်ရေးလိုက်ရပါတယ်. ခင်ဗျာ.။(အိမ်မှာ စားပွဲနဲ့ ကုလားထိုင်ကလည်း ရှိမှ မရှိဘဲကိုး.)။ ကဗျာရေးတဲ့ သူတွေမှာလည်း ပန်းချီဆရာ၊ ပန်းပုဆရာတွေလို ကိုယ်ပိုင် စတူဒီယိုတခု၊ ဝပ်ရှော့ တခု ရှိရမယ်တဲ့ ခင်ဗျ.။ သူကိုယ်တိုင်တောင် အပင်ပန်းခံပြီး သစ်သားချောင်းတွေ ဖြတ်၊ တီရှပ်ပေါ်မှာ စာတန်းတွေ အရုပ်တွေ ရေးပြီး ကဗျာ တခေတ် ဆန်းသစ်ရေး လုပ်နေပါသတဲ့..။ မြန်မာကဗျာ အတွက် အားတက်စရာပါပဲ ခင်ဗျာ.။ နောက်ထပ် လက်ရှိ မြန်မာ ကဗျာကို မကျေနပ်လို့ အသစ်ကို စမ်းသပ်ရေးဖွဲ့နေတဲ့ ကဗျာဆရာတွေလည်း ရှိပါသတဲ့…။ သူတို့ကို Experimental လို့ ခေါ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်.။ပို့စ်မော်ဒန် ကဗျာ တစ်ခေတ် ထူထောင်ကြမယ်လို့လည်း ကြားရပါတယ်.။. ဟုတ်ကဲ့…မော်ဒန်၊ ပို့စ်မော်ဒန်ဆိုတာ လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ကင်းကွာပြီး စာပေ အနုပညာ မှာချည်းပဲ ထူုထောင်လို့ ရ မရဆိုတာတော့ ကျွန်တော် ဆက်လက် လေ့လာပါဦးမည်. ခင်ဗျာ.။ တီးမိခေါက်မိ သလောက်ကိုလည်း အခုဒီ "အမည်ပေးမထား(Untitle)" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ တောင်ရောက် မြောက်ရောက် ရေးပါဦးမည်. ခင်ဗျာ.။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…။ ။
တေဇာအောင် (Nov 11, 2009,Wed)
Pop ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ကဗျာ
ညနက်နက် ဆယ်နာရီ၊ အရက်မူးလွန်ခြင်းနှင့် တရားမျှတမှု
အရင်းရှင် နိုင်ငံမှ ကွန်မြူနစ်တယောက်
ပျော်ရွှင်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း(Make me happy)
ကဗျာဆရာ၊ ကဗျာအယူအဆနဲ့ ကဗျာရေးခြင်း(အဆက်)
ကဗျာဆရာ၊ ကဗျာအယူအဆနှင့် ကဗျာရေးခြင်း